क्षतिपछि फेरियो सौराहाको स्वरूप
चितवन, मङ्सिर ११ गते । गएको साउन महिनाको अन्तिम सातामा आएको बाढीले तहसनहस बनाएको सौराहाका पव तथा रेस्टुरेन्ट नयाँ ढङ्गबाट आकर्षण तरिकाले सञ्चालनमा आएका छन् ।
साउनको २९ गते आएको बाढीले राप्ती नदीको किनारमा रहेका प्रायः सबै पव तथा रेस्टुरेन्ट बगाएर बगरमा परिणत भएको थियो । तीन महिनाको मेहनतले ती स्थान रमणीय बनाइएको छ भने पर्यटक बस्नका लागि आकर्षण रूपमा सजाइएको छ । नदीको पानीमा चितवन निकुञ्जको जङ्गलबाट सूर्यास्त हुँदै गरेको दृश्य हेर्नका लागि किनारमा पर्यटक जाने गर्दछन् । सूर्यास्तसँगै मीठा परिकार खाँदै रमाउने, ‘हात्ती स्नान’ गर्ने, डुङ्गा शयर गर्नेजस्ता गतिविधि किनारको पवबाट पर्यटकले हेर्ने गर्दछन् । बगरमा परिणत भएको पव अहिले पुरानै स्वरूपमा नयाँ ढङ्गबाट सजिएपछि थप आकर्षण देखिएको क्षेत्रीय होटल सङ्घ सौराहाका अध्यक्ष सुमन घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
बगर बनेका झण्डै एक दर्जन रेस्टुरेन्टमा करोडौँको लगानी गरिएको रेवान सौराहाले जनाएको छ । साउन २९ गते राति आएको बाढीले समग्र सौराहालाई नै प्रभावित बनाएको थियो । त्यसमध्ये कतिपय होटलले एक सातादेखि नै सेवा सुरु गरेका थिए तर राप्ती किनार भने बगर बनेकाले पुरानै स्वरूपमा ल्याउन समय लागेको हो ।
पर्यटकका लागि सबै सेवा सुरु भइसकेको छ, सौराहा ‘बीच’ रेस्टुरेन्टका सञ्चालक बलराम दाहालले भन्नुभयो, रेस्टुरेन्ट पुरानै स्वरूपमा ल्याउन झण्डै ५३ लाख खर्चनुपर्यो । उहाँका अनुसार किनारका पर्यटकीय क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि झण्डै रु. तीन करोड खर्चनुपरेको छ । सौराहामा बढी पर्यटकीय चहलपहल हुने राप्ती नदी किनार हो । जङ्गली जनावर पानी खान राप्ती आउँदा पवबाट सहजै देख्न सकिन्छ । गैँडा, चित्तल, गोही दैनिक देखिन्छन् । राप्ती किनार सौराहाको गहना र मुटुको रूपमा रहेको पर्यटन व्यवसायी जितु तामाङ बताउनुहुन्छ ।
बाढीले सौराहा बीच रेस्टुरेन्ट, राप्ती बीच रेस्टुरेन्ट, सन्सेट भ्यू रेस्टुरेन्ट, राप्ती रेस्टुरेन्ट, सेन्ट्रल बीच, टपटेन रेस्टुरेन्ट, टिफिन हाउस रेस्टुरेन्ट र रिभर बीच रेस्टुरेन्टलाई बगर बनाएको थियो । सँगै रहेको होली जङ्गल पव र टाइगर क्याम्पको भौतिक संरचना केही जोगिए पनि ठूलो क्षति बेहोरेको थियो । अहिले भने सबै उठेका छन् ।
रत्ननगर नगरपालिका वडा नम्बर ६ का वडाध्यक्षसमेत रहनुभएका पर्यटन व्यवसायी बलराम दाहाल विभिन्न क्षेत्रका ड्याम नाघेर बाढी आउँदा पर्यटकको मौसममा हेर्दाहेर्दा पवहरू बगर भएर करोडौँको घाटा भएको बताउनुहुन्छ । बाढीले होटलहरूमा करिब रु. १५ करोडको क्षति पुगेको क्षेत्रीय होटल सङ्घ चितवनका महासचिव राममणि खनाल बताउनुहुन्छ । रेस्टुरेन्ट व्यवसायको मात्रै रु. पाँच करोड ४१ लाखको क्षति भएको बताउनुहुन्छ क्षेत्रीय रेवान सौराहाका अध्यक्ष गोकर्ण गिरी । जसमा ४३ वटा रेस्टुरेन्ट छन् । यहाँ करिब ६० रेस्टुरेन्ट र ११० होटल सञ्चालनमा छन् । दैनिक दुई हजार ८०० पर्यटक बस्न सक्ने क्षमता सौराहामा छ । हात्ती, सफारी, जिप सफारी, डुङ्गा सफारी गर्ने, अनि चितवन निकुञ्जका गैँडा, बाघलगायत वन्यजन्तु अवलोकनका लागि पर्यटकहरू लालायित हुने पर्यटन व्यवसायी दामोदर रेग्मीको भनाइ छ ।